About Us - Bukit Shuang bei Glasswork Co., Ltd.
Glass Shumaca Holder
Glass Fish Haanta
Glass Fruit & Plate Candy, setelayt
koob Cream Ice
Product Borosilicate Glass Sare
Bukit Shuang bei Glasswork Co., Ltd.
Waxaan ku dadaaleynaa fiican, horumar joogta ah iyo hal-abuurka, waxaa ka go'an inay noo ah "macaamiisha trust" iyo "dooqa koowaad ee accessories mishiino injineernimada brand" qeybiyeyaasha dhigi. inoo dooro, wadaagaya xaaladda guul-guul ah!
Bukit shuangbei shirkadda alaabta galaas waxaa la aasaasay sanadkii 2006, waxaana uu ku takhasusay saarka galaas, design dhalooyinka iyo processing galaas muddo toban sanadood ah. Shirkadda Our ku adkaysanayaan in fikradda ah wax soo saarka sayniska, maamulka adag oo sii innovating, sannadihii la soo dhaafay, waxa uu hormariyey noqday mid ka mid ah shirkadaha ugu wanaagsan ee galaas ee Shiinaha. waxyaabaha Company ma gaaro kaliya soo dhaweyn ah ee macaamiisha Asian iyo macaamiisha Australia, laakiin sidoo kale dhisi iskaashiga mudada dheer shirkadaha qaar ka mid ah Yurub iyo Mareykanka. Sababtoo ah ee ganacsiga kordhaya sanadihii la soo dhaafay, shirkaddu waxay leeyihiin dhiso warshad cusub oo Shanxi iyo soo bandhigay wax soo saarka iyo processing qalab horumarsan, waxaan sidoo kale la asaaso koox xirfadeed design in la sameeyo qaar ka mid ah adeegyada sida applique, derderkii, midabka buufiyo, sandblasting, dahab si loo hagaajiyo qiimaha wax soo saarka macaamiisha ee, this ka dhigi doonaa tartan ee suuqa. waxyaabaha Company waxaa ka mid ah waxyaabaha aan dabiici ahayn sida fijaan, galaas biyo ah, dheri, saxan galaas, kidhligii, laambadda, iwm khamri, iyo noocyada kala duwan ee wax soo saarka dhismaha mashiinka: koobkii khamriga, koob yar, koob biyo, bakeerigaagu biir, kidhligii, haashteriga, iwm
oo dhan ee alaabta shirkadda waxay leeyihiin mari SGS, FDA, BV iyo imtixaanka LFGB, si buuxda loo xaqiijiyo ammaanka iyo practicability in la isticmaalo. Waxa aannu ku ballanqaadaynaa, waxaanu isticmaali doonaa tayada fasalka-koowaad ah, adeeg fiican, iskaashi firfircoon, in sarrifka tala si wada dhistaan mustaqbal fiican. Bukit shuangbei shirkadda alaabta galaas waa shirkad xirfadeed oo khaas ah soo saaridda alaabooyin galaas, waxaan leenahay nidaam maamul oo tayo leh si buuxda sayniska. Bukit shuangbei shirkadda alaabta galaas leeyihiin sumcad wanaagsan ee China, saaxiibada soo dhaweyn diiran ka yimid dunida oo dhan si ay u booqdaan Shirkadda iyo in la dhiso ganacsi nala.
Tirada 0579-85011919 fax:: Telefoon 0579-89940449
Bal aan ka bilowno hadlo waxa ku saabsan MASHRUUCA
No.B8602, Haike Electronic Business Park, Huancheng South Road, Bukit City, Zhejiang Provice, Shiinaha, 322000